Ukunethezeka kwasekhaya okujwayelekile - I-Airbnb
Ukunethezeka kwasekhaya okujwayelekile
Pietracorbara, Corse, i-France
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Lionel
Indlu ejwayelekile enezitezi ezimbili evuselelwe ngokuphelele engu-65 m²,
enakho konke ukunethezeka nethala lokubuka ulwandle elingu-50 m². Esigodini esithulile ukuya emaminithini angu-10 ukusuka olwandle kanye nemizuzu engu-40 ukusuka eBastia (imoto). Eduze komfula nezindlela zokuhamba. Ukupaka.
Le Ndlu iyihhavini lesinkwa elidala elisukela ezindlini zokuqala zedolobhana (c. 1336). Akahlukanisiwe, uhlehlisiwe emgwaqeni obheka ulwandle/i-Italy. Inesitezi sokuqala sekamelo lokulala elinombhede ongu-1 ongu-140 kanye negumbi lokulala elinemibhede emi-2 eyisitezi sangasese esingu-90 esingu-10 m². Phansi, igumbi lokuphumula elikhanyiswe uhhavini wesinkwa wangaphambili lifakwe usofa, i-TV/DVD/ividiyo yemidlalo. Ikhishi lihlome ngokuphelele (ihhavini, i-microwave, ifriji, ifriji, umshini wokuwasha izitsha, ipuleti lokungeniswa). Igumbi lokugezela elenziwe ngokuphelele ngemabula ne-granite lineshawa, i-pantry eseduze ifakwe umshini wokuwasha. Ithala elikhulu elingamam² angama-50 elimbozwe ngamalawuzi linombono olwandle nase-Italy. Iboshwe nge-cherry futhi ine-barbecue netafula lengadi (izindawo ezingu-6), 4 phumula. Ukukhanyisa kwangaphandle kungachitha ubusuku obuhle.
Ubusuku basehlobo bupholile ngenxa yomoya ohelezayo entabeni futhi amagumbi asebusika afakwe izifudumezi.
Indawo yokupaka. Ukwamukela abantu abangu-4.
4.91 out of 5 stars from 134 reviews
4.91 · 134 okushiwo abanye
I-hamlet evamile yezindlu ezindala itshe elomile le-cap corse, elithule kakhulu kusihlwa sasehlobo lipholile futhi limnandi. Ukuvakasha okuzungeze iNdlu: Amabhuloho eGenoa nokugeza echibini lemvelo loMfula, izindlela eziningi eziqala ekutholweni kwemizana yasesigodini (indlela yamahhavini, indlela yamadolobhana afika olwandle), ihlathi lezihlahla ze-chestnut kanye Ama-Oaks. Ibhishi elihle elinezindawo zokudlela ezisogwini lolwandle.
Idolobhana liseduze nezinye izindlela zezinyawo ezaziwayo (indlela yama-coolers aseCardo, indlela yezikhulu zeCustoms of Macinaggio eCenturi, indlela yeCima e di Folicce 1 305 m Sisco njll.) kanye (Pietracorbara, Barcaggio) isihlabathi noma itshana. amabhishi.
couple avec deux enfants originaire du Cap Corse.
Abahambi abasendaweni yokwamukela nokuvakasha kweNdlu. Silalela abahambi ngesikhathi sonke sokuhlala futhi sinikeze izeluleko mayelana nezindawo ongazivakashela, izindawo zokuhamba, izindawo zokudlela njll. Izincwadi namadokhumenti kuyatholakala endlini ngalokho.
Jabulela ihora lokusuka nokufika ovumelana nezimo (amathuba okushiya okhiye beNdlu e-Bastia ngosuku lokuhamba).
Abahambi abasendaweni yokwamukela nokuvakasha kweNdlu. Silalela abahambi ngesikhathi sonke sokuhlala futhi sinikeze izeluleko mayelana nezindawo ongazivakashela, izindawo zokuhamba…
Hlola ezinye izinketho ezise- Pietracorbara namaphethelo